बैंक खाता अभियान | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय बैंक खाता अभियान
on: April 16, 2019 सम्पादकीय
सरकारले वैशाख १ गतेदेखि बैंक खाता अभियान शुरू गरेको छ । सबै नेपालीको बैंक खाता होस् भनेर यो अभियान मुलुकभरि शुरू गरिए पनि जुन वर्गप्रति यो कार्यक्रम लक्षित छ त्यो वर्ग लाभान्वित हुनेमा भने आशंका गरिएको छ । बैंक खाता खोल्नु नै समृद्धिको बाटो हो जस्तो गरी सरकारले यसको प्रचार गरे पनि पर्याप्त तयारी नगरी शुरू गरिएकाले यसले तात्त्विक अन्तर ल्याउन सक्ने भने देखिँदैन । के यो अभियानबाट सबै नेपालीको खाता खुल्ला ? सबैले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउलान् त ?
बैंक खाता खोल्नुमात्रै अभियानको सफलता होइन । उनीहरूको आयव्ययलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु एउटा पाटो हो भने यसबाट गरीबी न्यूनीकरण गर्नु अर्कोे पाटो हो ।
शहरी क्षेत्रका अत्यधिक जनताको बैंक खाता छ भने गाउ“घरतिरका मानिसको बैंक खाता छैन किनभने त्यहा“ बैंकहरू पुगेकै छैनन् । तर, सहकारीहरू भने गाउँमै पनि प्रशस्त छन् र त्यहाँ अत्यधिक नेपालीको खाता छ । न्यून आय भएका व्यक्तिहरू भने सहकारी तथा बैंक दुवैको पहु“चबाहिर छन् । बैंकिङको सुविधा नपाएका व्यक्तिहरूलाई बैंकिङ सुविधा दिनु समावेशी विकासलाई शक्ति प्रदान गर्नु हो । त्यसैले यिनीहरूलाई बैंकिङको पहुँचमा ल्याउन अभियान शुरू गरिएको हो । यही वर्गलाई सहज हुने गरी बैंकहरूले काम गर्नेमा भने अझै शंका छ । सहकारीहरूले भने यस्ता न्यून आय भएका व्यक्तिको घरैमा गई सेवा दिन्छन् । त्यसैले यो बैंक खाता अभियान मध्यम वर्गप्रति लक्षित देखिन्छ । तर, यो वर्गका धेरैले बैंकमै खाता खोलिसकेका छन् ।
यो अभियानले बैंक खाता खोल्नलाई केही सजिलो बनाएको भने छ । विगतमा अनेक कागजपत्र मागेर बैंकहरूले हैरान पार्थे भने यस अभियानमा प्रमाण खुल्ने कुनै सरकारी कागजात भए पुग्छ । तैपनि गरीब र अशिक्षितलाई बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन अझै चुनौती छ । सरकारी अभियानलाई बैंकहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी खाता खोल्न आग्रह गरिरहेका छन् र सम्बद्ध कर्मचारीहरूले यो अभियानलाई राम्ररी बुझेको पनि पाइँदैन । विपन्न र अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई रकम झिक्न र राख्न कत्तिको सजिलो बनाइन्छ, त्यो पनि थाहा छैन । अझ बैंकहरूले खाता निःशुल्क खोलिदिए पनि हरेक कारोबारका लागि विभिन्न शुल्क लिने गरेका छन् । पढेलेखेका व्यक्तिहरूलाई समेत झुक्याएर शुल्क लिएको अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले रोक्न सकेको छैन । त्यस्तोमा विपन्न वर्गले खाता खोल्दैमा बैंकिङ पहुँच पुग्यो भन्नु अर्थहीन हुन्छ ।
भारतमा बैंकिङ पहुँचका लागि ‘प्रधानमन्त्री जनधन अभियान’ शुरू गरिएको थियो । नेपालको यो अभियान पनि त्यसैको नक्कल हो । भारतमा फोटोयुक्त कुनै परिचयपत्र भए खाता खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यही खाताबाट बीमा आदि सरकारी सुविधा दिनेमात्र होइन, केही सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेपछि ओभरड्राफ्टको समेत सुविधा दिइएको छ । नेपालमा भने त्यस्तो केही सुविधा छैन । २ करोड ९० लाख जनसंख्या भएको नेपालमा २ करोड ६८ लाख खाता खुलिसकेका छन् । वृद्धभत्ताका लागि बैक खाता अनिवार्य भएकाले वृद्धवृद्धाहरूले खाता खोलिसकेका छन् । बाँकी रहे केही विपन्न । यो अभियानबाट ती विपन्न जनताको खाता खोलिएला त ?
बैंक खाता खोल्नुमात्रै अभियानको सफलता होइन । उनीहरूको आयव्ययलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु एउटा पाटो हो भने यसबाट गरीबी न्यूनीकरण गर्नु अर्कोे पाटो हो । तर, जबसम्म वित्तीय प्रविधिको व्यापक उपयोग गरिँदैन वित्तीय समावेशिता प्रभावकारी हुँदैन । खासगरी भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय र सहज गरिनुपर्छ । अहिले विपन्न नेपालीको हातमा समेत मोबाइल पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ मार्फत केही विपन्न मुलुकहरूले गरीबी न्यूनीकरणमा सफलता पाएका छन् । भारतमा जनधन अभियान सफल हुनुमा सहज भुक्तानी प्रणाली प्रमुख कारण मानिन्छ । नेपालले भने यस क्षेत्रमा केही काम गरेको पाइँदैन ।
मोबाइलबाटै भुक्तानी प्रणालीको विकास गरियो भने बैंक नपुगेको ठाउँमा पनि बैंकिङ पुग्छ । विद्युतीय कारोबारका लागि सहज पेमेन्ट गेटवेको विकास भएको छैन । केन्द्रीय बैंकले यसका लागि आफैले सक्रियता लिन सक्छ अथवा सहजीकरण गरी कुनै निजी कम्पनीलाई यस्तो काम गर्न दिन सक्छ । यसो भएमात्रै बैंक खाता अभियानले विपन्न र अशिक्षित वर्गलाई बैंकिङ सुविधा दिन्छ र उनीहरू पनि समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन पाउँछन् ।